Bulsha weynta Puntland oo ka hadlay joojinta Xawaaladaha Somalida ee Waqoyiga America – SBC
Bulsha weynta Puntland oo ka hadlay joojinta Xawaaladaha Somalida ee Waqoyiga America
Posted by Webmaster on December 30, 2011 Comments
Shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada Puntland gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ee Puntland ayaa ra’yigooda ka dhiibtay xanibaada lagu soo rogay Xawaaladaha Soomaalida ee Dalkaasi Mareykanka.
Barnaamijka Nasashada SBC ee ka baxa Maalinta jimcada ah Idaacada SBC Interntional oo maanta lagu qaadaadhigayay Qodobka ah xanibaada lagu soo rogay Xawaladahaasi ayaa ay soo galeen dad aad u tirob adan qadadka telefoonka si ay ra’yigooda uga dhiibtaan, waxayna isku raaceen in arintaasi ay tahay mid caqabad ku ah qaar ka mid ah bulsha weynta soomaaliyeed maadaama, ay soo biili jireen dadkooda oo ku dhaqan halkaasi.
Waxay sheegeen in ay si weyn uga xumaadeen arintani uu ku kacay Mareykanku, islamarkaana ay tahay in saraakiisha sar sare ee Xukuumada KMG ah ee Soomaaliya ay u istaagaan sidii wax looga qaban lahaa.
Waxaa kale oo ay sheegeen in dowlada Mareykanka dhacdadan ay ku dhaqaaqday ay noqoneyso mid siweyn saameyn ugu yeelata bulshada Soomaaliyeed inta eheladooda halkaasi ku sugan islamarkaana ka sugayay in ay wax soo taraan.
Qaar ka mid ah dadka ayaa si cara leh ugu dhaleeceeyay Dowlada Marekanka in aanay aheyn dhacdooyin yar yar daraadeed ay u qaado talaabadan oo kale ayna siweyn uga xumaadeen.
Maanta oo Jimce ah ayay ku eked xiligii loo qabtay in xawaaladaha Soomaalida laga joojinayo howlihii lacag dirista Soomaaliada, ka dib markii ay soo bexeen eedeymo iyo wal wal ka soo foodsaartar Bangiyada Mareykanka ee shaqada la lahaa xawaaladaha Soomaalida in lacagaha Soomaaliya loo diro ay ku jiraan kuwo loogu talagalay waxa ay mareykanka ugu yeeraan Argagixisada.
mukhtaar cabdi qani axmed says:
anigoo ah muwaadin soomaliyeed waxaan ka xumahay joojionta xwlada soomalidi maadama aay yihiin kuwo kaliya oo bulshad u adeego markaan ka hadlayo xawladda ma han mid kaliya dhamaan xawalladaha oo dhan maxaayelay wadanka waxa shaqeeya waa iyaga waxaan orankara waxa dhidikooda cuno waa iyaga somaliya horemarka maantay lagu diirsaday waa xawaladha sida tawal amal qaran